OnePlus အကြောင်းသတင်းများ - ပစ်လွှတ်ခြင်း၊ မိုဘိုင်း၊ root နှင့်အခြားအရာများ - Androidsis | Androidsis (စာမျက်နှာ ၂)
OnePlus သည်ထောက်ခံထားသောမော်ဒယ်များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် OxygenOS beta ကိုဆွဲယူသည်
OnePlus မှယောက်ျားများသည်သူတို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည့်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုမြင့်မားမှုကြောင့်၎င်းကိရိယာများကိုသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ယခုအချိန်အထိရရှိနိုင်သော Oxygen OS beta အားလုံးကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်ဖိအားပေးခံရ
ပထမဆုံး OnePlus ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကို OnePlus Bullet Wireless ဟုခေါ်တွင်ပြီး OnePlus6နှင့်မိတ်ဆက်ပေးမည်။
OnePlus က၎င်း၏ ဦး ခေါင်းကိုကြိုးမဲ့နားကြပ်ကဏ္intoတွင်တပ်ဆင်လိုသည့်ပုံစံနှင့် OnePlus6နှင့်အတူ OnePlus Bullet Wireless ကိုစတင်မည်။
OnePlus6၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်: ထစ်ကိုအတည်ပြုသည်
OnePlus6မှာ Notch တစ်ခုရှိတယ်။ ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်။ notch ရှိမည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ high-end ဖုန်းအကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ၊ အသုံးပြုသူများစွာကြောက်ရွံ့သည်။
OnePlus6၏ယိုစိမ့်ပုံတွင် 3.5mm Jack နှင့် USB-C တို့ကိုဖော်ပြသည်
OnePlus6ကိုတွစ်တာတွင်ပေါက်ကြားနေသောပုံတွင်တွေ့မြင်ရပြီး ၃.၅ မီလီမီတာအသံပေါက်၊ USB-C connector နှင့်အခြားအရာများကိုဖော်ပြသည်။
OnePlus 5T ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောင်းချခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်
ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိ OnePlus 5T ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။ သင်နိုင်ငံအတွင်းသင်မ ၀ ယ်နိုင်တော့သော high-end အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ၊ ၎င်းသည် OnePlus6အလွန်နီးကပ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။
OnePlus 5T 6GB / 64GB ကို GearBest တွင်ယူရို ၄၉၉ ထက်ယူရို ၄၂၂.၉၉ ဖြင့်ဝယ်ယူပါ
OnePlus 5T သည် GearBest တွင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ သင်ဤမယုံနိုင်လောက်အောင်မြင့်မားသော high-end terminal ကိုရချင်လျှင်၊ ကန့်သတ်ထားသည့်အချိန်အတွက်သာဖြစ်သောကြောင့်အမြန်ဆုံးလုပ်ပါ။ အသေးစိတ်ကိုသင့်အားပေးသည်။
5GB RAM၊ 8-megapixel ကင်မရာနောက်ဘက်ကင်မရာနှင့် 20: 18 မျက်နှာပြင်တို့ဖြင့်ရောက်ရှိလာမည့် OnePlus 9T ၏ပထမဆုံးတရားဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။
OnePlus6သည် 2018 ခုနှစ်အစတွင် ၆ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်ဘောင်မရှိဘဲ Snapdragon6ဖြင့်ရောက်ရှိမည်
OnePlus6ကိုလာမည့်နှစ်တွင်မျှော်လင့်ရပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်တင်ပြလိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည်။
OnePlus5တွင်အထူးထုတ်ဝေသည်
စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ OnePlus သည်ကန့်သတ်ထားသောထုတ်ဝေမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ Jean-Charles de Castelbaja နှင့်လက်တွဲသည်
ယခုသင်သည် 5GB OnePlus 128 ကို Slate Grey တွင်လည်းရနိုင်သည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီသည် Salte Grey ကိုစွမ်းဆောင်ရည် ၁၂၈ GB ရှိသည့်အထင်ကရ OnePlus5ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်၎င်း၏ catalog ကိုချဲ့ထွင်သည်။
Android O သည် OnePlus3အတွက်နောက်ဆုံး update ဖြစ်လိမ့်မည်
OnePlus3နှင့် OnePlus 3T နှစ်ခုစလုံးသည် Android O ကိုရရှိမည်ကိုအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးအဓိက update ဖြစ်လိမ့်မည်။ Android P ကိုနှုတ်ဆက်ပါသလား။
တရုတ်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပရိုဖိုင်းတွင်အနီရောင်၊ ရွှေသို့မဟုတ်ကြံ့ချိုများဖြစ်နိုင်သည့် OnePlus5အမျိုးအစားသစ်ကိုမကြာမီရောက်ရှိတော့မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
OnePlus5vs OnePlus 3T vs OnePlus3- အဓိကကွာခြားချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်သော OnePlus5၏သတ်မှတ်ချက်များကို၎င်း၏ယခင်များဖြစ်သော OnePlus 3T နှင့် OnePlus3နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။
အသစ်ဖြစ်သော Oneplus5နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များ - နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်း
OnePlus5အသစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်သိထားသင့်သမျှသည်၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ။
OnePlus5အတွက်ပထမဆုံးတီဗီကြော်ငြာကိုအိန္ဒိယတွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်
OnePlus5အတွက်တီဗီကြော်ငြာအသစ်သည်စမတ်ဖုန်းအားလုံးလုံးပြသသည်။ တရားဝင် OnePlus5ကိုဇွန် ၂၀ ရက်တွင်စတင်မည်ဖြစ်သည်။
OnePlus5၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်းကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Snapdragon5နှင့်နောက်ကင်မရာနှစ်လုံးပါ ၀ င်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ၊ စျေးနှုန်းနှင့်နောက် OnePlus 835 ၏ rendering အသစ်ကိုမကြာသေးမီက ၀ က်ဘ်ပေါ်၌တွေ့ရသည်။
သတင်းဆိုး! အဆိုပါ OnePlus2ကို Android Nougat မှ update ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
OnePlus ကုမ္ပဏီမှနှစ်နှစ်မပြည့်သေးသောသူများနှင့်တိတိကျကျကတိပြုခဲ့သည့်တိုင် OnePlus2သည် Android Nougat ကိုလက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြု
OnePlus5၏ပထမ ဦး ဆုံးတရားဝင်ပြန်ဆို
OnePlus သည် OnePlus5၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်ကိုထုတ်ဖော်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး၎င်း၏ဇတ် ၂၀ တွင် dual-camera နှင့် SD 20 ဖြင့်ပြသမည့်၎င်း၏ flagship အသစ်ကိုပြသလိုက်သည်။
5GB RAM ပါဝင်သည့် OnePlus 8 ကိုဇွန် ၂၂ ရက်တွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
Amazon India သည် OnePlus5မော်ဒယ်၏ 8GB RAM ပါသောအရောင်းမြှင့်တင်ရေးပုံကိုဇွန်လ ၂၂ ရက်တွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
OnePlus5သည် Oppo R11 နှင့်တူညီသည်
OnePlus5၏ပထမ ဦး ဆုံးဓာတ်ပုံ၏ယိုစိမ့်မှုအပြီးတွင် OnePlus အသစ်၏အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်သည် Oppo R11 နှင့်အလွန်ဆင်တူကြောင်းအများအပြားတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
ဇွန်လ ၂၀ အတွက် OnePlus5လွှတ်တင်ခြင်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည်
စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ OnePlus သည်ဇွန်လ ၂၀ အတွက်၎င်း၏နောက်ထပ်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သော OnePlus5ကိုအတည်ပြုသည်
ယခုသင်တရားဝင်တရား ၀ င် OnePlus5wallpapers ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်
တရားဝင် OnePlus5နောက်ခံပုံများကိုယခုအခါအခမဲ့ download ရယူပြီးမည်သည့်စမတ်ဖုန်းတွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
OnePlus3နှင့် OnePlus 3T တို့သည် Android O ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်
OnePlus ၏ CEO က OnePlus3နှင့် OnePlus 3T ဖုန်းများသည် Android O. ခေါ် Android version ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဟုမကြာသေးမီကအတည်ပြုခဲ့သည်
OnePlus5ကိုဇွန် ၁၅ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်ကြောင်းပေါက်ကြားပိုစတာတစ်ခုအရသိရသည်
လူမှုကွန်ယက်များမှပေါက်ကြားခဲ့သောပိုစတာတစ်ခုအရ OnePlus5ကိုဇွန် ၁၅ ရက်တွင်တရားဝင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
OnePlus လွှဲပြောင်းမှုအစီအစဉ်သစ်သည်သင်၏နောက်ထပ်စမတ်ဖုန်းဝယ်ယူမှုများအတွက်အထူးလျှော့စျေးပေးလိမ့်မည်။ သင် OnePlus5ကိုဝယ်ယူရန်စီစဉ်ထားပါကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
OnePlus 3T ကိုဇွန် ၁ ရက်တွင်ဥရောပ၌ရပ်ဆိုင်းမည်
OnePlus 3T သည်ဥရောပတွင်ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ရောင်းချခြင်းကိုရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်တရုတ်ကုမ္ပဏီကအတည်ပြုခဲ့သည်။
OnePlus5တွင် Snapdragon 835 နှင့် touch latency တိုးတက်လာလိမ့်မည်
လာမည့် OnePlus5ဟုခေါ်သည့်နောက်ထပ် OnePlus စွမ်းဆောင်ချက်သည် Snapdragon 835 ပရိုဆက်ဆာနှင့်ထိတွေ့ထိတွေ့မှုအရှိန်မြှင့်ဖြင့်ယခုနွေရာသီတွင်ရောက်ရှိမည်။
Oneplus5တွင်ကင်မရာများတွင် DxO နည်းပညာရှိသည်
Oneplus5၏ပေါင်းစပ်ထားသောကင်မရာများသည် DxO နည်းပညာ ရှိ၍ ဒီဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံတွင်အခြေခံစံနှုန်းဖြစ်လာနိုင်သည်
Geekbench တွင် OnePlus5Galaxy S8 နှင့် Xperia XZ Premium တို့ကိုကျော်ဖြတ်သည်
OnePlus5သည် Geekbench ၏စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုများကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီး Galaxy S8 နှင့် Sony Xperia XZ Premium ထက်သာလွန်သည်။
OnePlus သည် 3GB OnePlus 128T ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး OnePlus5၏ပထမဆုံးစာသားကိုထုတ်ပြန်သည်
OnePlus သည် OnePlus 128T ၏ 3GB မော်ဒယ်ကိုရောင်းချခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်၎င်း၏နောက်ထပ်ထင်ရှားသည့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် OnePlus5အတွက်ပထမဆုံးကြော်ငြာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
OnePlus5သည်မကြာမီလာမည့် Galaxy S8, LG G6 နှင့်အခြား high-end ဖုန်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်လာမည့်အချိန်တွင်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးစွမ်းဆောင်ရည်အတူတူပင်ရှိသည်။
OnePlus5ကင်မရာဖြင့်ရိုက်ယူထားသောပုံများစွာသည်မကြာသေးမီကဝဘ်ပေါ်မှပေါက်ကြားခဲ့ပြီး terminal တွင်ဖြစ်နိုင်သည့် dual ကင်မရာကိုညွှန်ပြခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့် OnePlus5တွင် Snapdragon 835 SoC နှင့်အနည်းဆုံး 6GB RAM တို့ကဲ့သို့သောအခြားအင်္ဂါရပ်များအပြင်အခြား dual-camera ကင်မရာတစ်ခုရှိမည်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Xiaomi Mi6ကို 6GB RAM၊ Snapdragon 835 ပရိုဆက်ဆာ၊ ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ OnePlus5ကော? ပိုကောင်းမလား၊
လာမည့် OnePlus5သည် Galaxy S8 နှင့် LG G6 နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏အသစ်ပြုပြင်ထားသောဒီဇိုင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော specs များဖြစ်သော Snapdragon 835, 8GB of RAM နှင့်အခြားသောအရာများသည်။
OnePlus2စမတ်ဖုန်းသည်တိုးတက်မှုအမျိုးမျိုးပါ ၀ င်သည့် OxygenOS update ကိုလက်ခံရရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည် Tare Nougat ကိုစောင့်နေဆဲဖြစ်သည်။
OnePlus 5, တရုတ်gရာမသစ်၏ကောလာဟလများ
OnePlus 5၊ တရုတ်ကုမ္ပဏီ OnePlus မှစမတ်ဖုန်းအသစ် Samsung Galaxy S7 Edge နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အတွက်ကွေးညွှတ်သည့်မျက်နှာပြင်ရှိလိမ့်မည်ဟူသောကောလာဟလအသစ်များ။
ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင် OnePlus သည်၎င်း၏ပထမဆုံးစတိုးဆိုင်အိန္ဒိယ၏အတွေ့အကြုံကိုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်
၎င်းသည် 'အတွေ့အကြုံ' စတိုးဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယရှိ OnePlus အတွက်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ သင်က၎င်း၏ဆိပ်ကမ်းအချို့ကိုဝယ်နိုင်သည့်တစ် ဦး ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်။
အဆိုပါ OnePlus3နှင့် 3T တရားဝင် Nougat update ကိုလက်ခံရရှိသည်
OTA မှတစ်ဆင့် OnePlus3နှင့် OnePlus 3T အတွက် Nougat မှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုကြေငြာပြီးနောက်ဤနေ့ရက်များရောက်ရှိလာသင့်သည်။
သင့်တွင် OnePlus3ရှိလျှင်ပွင့်လင်းသည့် beta တွင် Android 7.0 ကိုရနိုင်သည်
Android 7.0 Nougat beta ကို၎င်းတို့၏ OnePlus3တွင်တပ်ဆင်လိုသူများသည်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိပြီးဖြစ်သည်။
OnePlus သည် OnePlus 3T မှခဏအတွင်းဥရောပ၌တင်ပြရန်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်သည့်ထူးဆန်း၊ ပျော်စရာနှင့်အရူးဖြစ်သည်။
OnePlus3သည် 3.2.8p 1080fps video recording နှင့်အတူ OxygenOS 60 ကိုလက်ခံရရှိသည်
ဗားရှင်း ၃.၂.၈ တွင် 3.2.8FPS တွင် OxygenOS 1080 ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုဖွင့်ထားပြီးအိန္ဒိယအတွက် "panic button" ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
OnePlus 3T၊ အသစ်သောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဗားရှင်းကိုမနေ့ကလွှင့်တင်ခဲ့ပြီး၊ OnePlus3ကိုဝဘ်မှမဝယ်တော့ပါ။
OnePlus 3T သည် 8GB RAM ပါသောပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်နိုင်သည်
နို ၀ င်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် OnePlus 15T ကို 3GB RAM ရှိနိုင်ကြောင်းကောလာဟလသတင်းများအရသိရှိရသည့်ဖုန်းကိုတင်ဆက်လိမ့်မည်။
OnePlus3တွင်ယခုလအတွင်း Android Nougat beta နှင့်ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးဗားရှင်းရှိသည်
OnePlus3သည်ယခုလအတွင်း Android 7.0 Nougat ၏ beta version ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုယခုနှစ်အကုန်တွင်ရောက်ရှိမည်။
Qualcomm ၏ Snapdragon 821 ချစ်ပ်သည် OnePlus ဟုခေါ်သောထိုကုမ္ပဏီမှဖုန်းအသစ်၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်လိမ့်မည် - OnePlus 3T
Snapdragon3ချစ်ပ်ပါသည့် OnePlus 821T မကြာမီရောက်ရှိလာတော့မည်
OnePlus သည် 3T နှင့်အတူ OnePlus3hardware update ကိုဖြန့်ချိမည်။ Snapdragon 821 ချစ်ပ်သည်ဖုန်း၏မူလနှင့်တူညီမှုတူညီမည်ဖြစ်သည်။
OnePlus သည် OnePlus X အတွက်ပထမဆုံး Android Marshmallow တည်ဆောက်မှုကိုထုတ်ဝေသည်
OnePlus X သည်အသိုင်းအဝိုင်းကိုယ်တိုင်မှဖြစ်သော်လည်း Adroid 6.0.1 အတွက်ပထမဆုံး firmware ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလိုက်သောဤကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ရောက်မှုအဆင့်ဖြစ်သည်။
OxygenOS 3.2.2 သည် Doze တိုးတက်မှုနှင့်အတူရောက်ရှိလာပြီး OnePlus3အတွက်များစွာလိုအပ်သည်
OnePlus3သည် OxygenOS 3.2.2 firmware update ကိုလက်ခံရရှိနေပြီး၎င်းသည်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကိုရရှိစေပြီးအနည်းငယ်နှင့်အခြားသူများအတွက်ပါ။
အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ သတ်မှတ်၊ သွား !! OTA update ကို OnePlus3အတွက်တရားဝင်ပြန်လည်စတင်သည်
၂၄ နာရီပြင်းထန်သောအလုပ်ပြီးနောက်, ကျွန်ုပ်တို့သည် OnePlus 24 အတွက် OTA update ကိုပြန်လည်စတင်ကြောင်းကြေငြာနိုင်သည့်အနေအထားတွင်ရှိသည်။
OnePlus3သည်ယခုအခါ AnTuTu တွင်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်
AnTuTu သည်ထိပ်ဆုံးစမတ်ဖုန်း ၁၀ ခု၏စာရင်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်နှစ်လယ်တိုင်အောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ OnePlus 10 သည်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
OnePlus သည် OnePlus 3.2.0 အတွက် Oxygen OS3update ကိုရပ်သည်
လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်က OnePlus3သည် Oxyen OS 3.2.0 update ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည်ထည့်သွင်းသောအခါပြproblemsနာများကြောင့်၎င်းကိုရပ်တန့်လိုက်သောအခါဖြစ်သည်။
Oneplus သည် OnePlus 3.2.0 အတွက် OTA မှတစ်ဆင့် Oxygen OS3update ကိုထုတ်ပြန်သည်
Oneplus 3.2.0 အတွက် OTA မှတစ်ဆင့် OxygenOS3အသစ် update အသစ်သည်ယခုအခါအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ OTA သည် RAM ပြproblemsနာများကိုတည့်မတ်ပေးပြီးသတင်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
OnePlus3၏ထူးဆန်းသော RAM စီမံခန့်ခွဲမှုသည်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်
OnePlus3သည် 6GB RAM ကိုအသုံးမပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်၎င်းသည် terminal ၏ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းမပြုပါ။
OnePlus3သည် 6GB RAM နှင့်အတူမှတ်ဉာဏ်စီမံမှုပြhasနာများရှိသည်
OnePlus3ကိုမနေ့ကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးအမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအရ၎င်းသည်အက်ပ်များကို၎င်း၏ 6GB RAM တွင်ကောင်းစွာမထားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
OnePlus3သည်လျင်မြန်စွာအားသွင်းသည့်“ Dash Charge” ကို သုံး၍ ပါ ၀ င်သည့် cable နှင့် adapter ဖြင့်သာအသုံးပြုနိုင်သည်
OnePlus ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြုလုပ်ထားပြီး OnePlus3၏လျင်မြန်သောအားသွင်းမှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက်သင်ပါဝင်သောအားသွင်းကိရိယာကိုသုံးရလိမ့်မည်, ဘာလို့လဲဆိုတော့အခြားတစ်ခုဖြင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Pete Lau က OnePlus X ကိုနောက်တစ်ဖန်မလွှတ်တော့ဘဲ OnePlus3ကဲ့သို့အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်များကိုအာရုံစိုက်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်
OnePlus3ကိုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ Snapdragon 820 chip၊ 6GB RAM နှင့် internal memory 64GB ပါ ၀ င်သောဖုန်းအတွက် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။
3GB RAM ပါ ၀ င်သော OnePlus6version ကို GFXBench တွင်တွေ့ရသည်
OnePlus3သည်၎င်း၏ 6GB RAM ဗားရှင်းတွင်လူသိများသော benchmark tool တစ်ခုဖြစ်သော GFXBench မှပေါ်လာသည်
OnePlus3နှင့်အတူယူခဲ့သောဓာတ်ပုံများ၏ပထမဆုံးဥပမာများပေါ်လာသည်
Oneplus ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည်၎င်း၏လူမှုရေးအကောင့်တစ်ခုမှဇွန်လ ၁၄ ရက်တွင်တင်ပြမည့်ဒီ terminal နှင့်ပထမဆုံးရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံ ၃ ခုကိုမျှဝေလိုက်သည်။
OnePlus3၏ပထမဆုံး teaser ဗီဒီယိုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
OnePlus3သည် Amazon မှဖိတ်ကြားချက်မရှိဘဲ ၀ ယ်ယူနိုင်သောကုမ္ပဏီ၏ပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။ ယခုသူ၏ပထမဆုံးလှောင်ပြောင်ရောက်ရှိလာသည်။
သင်ဖိတ်ကြားချက်မရှိဘဲ OnePlus3ကို ၀ ယ်နိုင်သည်
OnePlus3သည် virtual reality မှအထူးပစ်လွှတ်မှုခံရမည်ဖြစ်ပြီးတစ်ရက်မှဖိတ်ကြားချက်မရှိဘဲ ၀ ယ်နိုင်သည်။
ဇွန် ၁၅ သည် OnePlus 15 စတင်ရောင်းချသည့်နေ့ရက်ဖြစ်သည်
တရုတ်နိုင်ငံ၏ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင် OnePlus3ကို virtual reality တွင်ဖျော်ဖြေသောအထူးတင်ဆက်မှုတစ်ခုတွင်ဇွန်လ ၁၅ ရက်တွင်စတင်မည်။
'Lab' သည် OnePlus3အတွက်လူထုအခြေပြုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်
OnePlus သည် OnePlus 30 ကိုလက်ခံရန်နှင့်အခြားထင်မြင်ချက်များကိုပြသရန်ထုတ်ကုန်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃၀ ကိုရှာဖွေနေသည်။
သိသာထင်ရှားသည့် OnePlus ရောက်ရှိမှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါ OnePlus သည်ယူရို ၃၀ မှ ၅၀ ကြားတန်ဖိုးရှိသည့် OnePlus One, OnePlus3နှင့် OnePlus X တို့၏စျေးနှုန်းကိုလျှော့ချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
OnePlus3သည် 5,5″ FHD မျက်နှာပြင်နှင့် Snapdragon 820 ချစ်ပ်တို့ဖြင့် TENAA ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်
OnePlus သည်ဇွန်လအစတွင်တင်ပြခြင်းမပြုမီနောက်ဆုံးခုန်ချရန် TENAA ကိုဖြတ်ကျော်ရန်သာလိုအပ်ခဲ့သည်။
2GB OnePlus 16 သည် OnePlus စတိုးမှပျောက်ကွယ်သွားသည်
ဒီဗားရှင်းအတွက်ဝယ်လိုအားနိမ့်ကျမှုကြောင့် OnePlus သည်ဥရောပ၊ အမေရိကန်နှင့်ဂရိတ်ဗြိတိန်တွင် ၁၆ GB GB OnePlus2ကိုရောင်းချခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
OnePlus One သည် OxygenOS 2.1.4 ကိုလက်ခံရရှိပြီး၎င်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်
OnePlus One ကိုအောက်စီဂျင် ၂.၁.၄ သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမြန်ဆန်စွာနှင့်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီတင်ပြသည်
OnePlus အဖွဲ့ကသင့်စက်ကိုဘယ်လို root လုပ်မလဲဆိုတာသင်ပေးသည်
OnePlus ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုအားမည်သို့ root လုပ်ရမည်ကိုဖော်ပြသည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် OnePlus2။
စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးသောအလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သော Oneplus X ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ခဲ့သည်
ဒီနေ့မှာတော့သင့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အလယ်အလတ်တန်းစား Android Terminal များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Oneplus X ကြွေထည်ပုံစံကိုအပြည့်အ ၀ ဆန်းစစ်လေ့လာထားပါသည်။
OnePlus2ဖိတ်ကြားချက်များယခု3ရက်အတွင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံး
ယခုအချိန်အထိ OnePlus2ကိုဝယ်ရန်ဖိတ်ကြားချက်သည် ၂၄ နာရီအကြာတွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ ယခုတရုတ်ထုတ်လုပ်သူက ၃ ရက်အတွင်းကုန်တော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
OnePlus One နှင့် OnePlus နှစ် ဦး အကြားမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု, ကခြားနားချက်ကိုတကယ်တန်ဖိုးရှိသလား
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား OnePlus One နှင့် OnePlus Two တို့အကြားမြန်နှုန်းမြင့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုယူဆောင်လာပြီးသင့်အားဖုန်းနှစ်ခုလုံး၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကွဲပြားမှုကိုပြသပါမည်။
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ OnePlus X ၏အသေးဆုံး terminal ၏သတ်မှတ်ချက်များကိုလူသိများပြီးဖြစ်သည်။
OnePlus သည်သုံးစွဲသူများကိုဖမ်းဆီးရန်အတွက်အသစ်တစ်ခုတွင် Samsung တစ်ခုနှင့်လဲလှယ်ရန်အတွက် OnePlus2ကိုပေးလိုက်သည်။ ဒီပရိုမိုးရှင်းအကြောင်းသင်ပိုမိုသိလိုပါသလား။
OnePlus X သည်ပုံများပေါက်ကြားခဲ့သည်
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူမှနောက်ထပ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုမှာ OnePlus X ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိရိယာနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားသိရပြီးပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာသောပုံရိပ်များကိုတွေ့မြင်ရပြီ။
OnePlus2ယနေ့တစ်နာရီယနေ့ဖိတ်ကြားခြင်းမရှိပါ
အဆိုပါ OnePlus2ဒီနှစ်အများဆုံး furor ဖြစ်စေသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စကားအများကြီးရှိခဲ့သည် ...
OnePlus သည်အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်အတွက်ဖြစ်ရပ်ကိုပြင်ဆင်သည်။ OnePlus X?
OnePlus သည်အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိသည်။ ဒီဖြစ်ရပ်မှာတရုတ်ထုတ်လုပ်သူကသူ့ရဲ့ terminal အသစ်ဖြစ်တဲ့ OnePlus X ကိုတင်ပြနိူင်တယ်။
OnePlus Mini ၏အင်အားနှင့်အတူပြန်လာသည့်ကောလာဟလများသည် ၄ ​​င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများဖြစ်မလား။
OnePlus ၏အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းဖြစ်သော OnePlus Mini နှင့်သက်ဆိုင်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များစွာပေါက်ကြားခဲ့သည်
OnePlus သည်ယခုနှစ်မကုန်မီစက်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ရန်စီစဉ်နေသည်။ ၎င်း၏အမည်မှာ OnePlus X ဖြစ်ပြီးလာမည့်အောက်တိုဘာလတွင်ရောက်ရှိမည်။
ဤနေရာတွင် Oneplus 2.1 အတွက် Oxygen OS2သို့အသစ်ပြောင်းခြင်း၊ ကင်မရာ၊ ပြခန်းနှင့် terminal စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင်တိုးတက်မှုများနှင့်အတူအသစ်ပြောင်းခြင်းရှိသည်။
Oneplus X၊ အောက်တိုဘာလတွင်ရောက်ရှိမည့်ယူရို ၂၂၀ ကုန်ကျမည့် Oneplus2mini
ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုယူရို ၂၂၀ နဲ့ရောင်းချမဲ့ Oneplus2Mini အသစ်ကိုဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာကိုစစ်ထုတ်ထားတယ်။
နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းစမ်းသပ် Moto X Play VS Oneplus2။
OnePlus သည်ကြော်ငြာပုံရိပ်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အနည်းငယ်ဇိမ်ခံမှုကိုကြိုဆိုကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဘယ်ဖြစ်နိုင်လဲ
Oneplus2ကို Oxygen OS 2.0.2 သို့ကိုယ်တိုင်မွမ်းမံနည်း
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Oneplus2Oxygen OS 2.0.2 သို့ Oxygen Os ဗားရှင်းအသစ်တရားဝင်အသိပေးခြင်းမပြုမီလက်ဖြင့်မည်သို့အပ်ဒိတ်လုပ်သင့်သည်ကိုယနေ့ပြသပါမည်။
တရား ၀ င်ထုတ်ကုန်အာမခံချက်ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲယနေ့ OTA မှတစ်ဆင့် Oneplus2update လုပ်ခြင်းပြproblemsနာများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြခဲ့သည်။
IFixit သည်လက်ကိုင်ဖုန်းများဖြုတ်တပ်ခြင်းကိုအထူးပြုသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် OnePlus2အသစ်ကိုလုံးဝဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ သင် OnePlus2အတွင်းပိုင်းအသွင်အပြင်ကိုကြည့်ချင်ပါသလား။
ဝေဖန်ခံနေရသည့် OnePlus ဖိတ်ကြားချက်များသည် OnePlus2အတွက် Ebay တွင်ပြုလုပ်သောပရဟိတလုပ်ငန်းလေလံပွဲမှတစ်ဆင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရောင်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေခဲ့သည်။
OnePlus2သည်တစ်မိနစ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသို့ရောင်းချသည်
OnePlus2ကိုယခုနှစ်၏ဆိပ်ကမ်းများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတရုတ်ပြည်တွင် ၁ မိနစ်အတွင်းသာရောင်းချခဲ့သည်။
OnePlus သည်တတိယမြောက်စမတ်ဖုန်းကိုပြင်ဆင်မယ့်နှစ်မကုန်မီထွက်ရှိလာမည့် OnePlus Mini?
တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော OnePlus သည်ယခုနှစ်အကုန်တွင်တတိယမြောက်စမတ်ဖုန်းကိုကိုင်ဆောင်ထားပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကောလဟာလသတင်းများအရ OnePlus Mini လား။
OnePlus 750.000 အတွက်ကြိုတင်မှာကြားထားမှု ၇၅၀,၀၀၀ ကျော်
OnePlus 750.000၊ ပထမဆုံး OnePlus မော်ဒယ်၏အောင်မြင်မှုကိုကျော်လွန်နိုင်သောဖုန်းအတွက်ကြိုတင်မှာကြားထားမှုပေါင်း ၇၅၀,၀၀၀ ကျော်ကြိုတင်မှာယူထားပြီးဖြစ်သည်။
OnePlus2သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ 4GB RAM နှင့် 64GB သိုလှောင်မှုအတွက်ယူရို ၃၉၉၊
OnePlus2ကိုတရားဝင်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးဖြင့်တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။ တစ်ခုမှာ 3GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှု 16GB သည်€ 339 အတွက်ဖြစ်ပြီးအခြား 4GB / 64GB ကိုယူရို ၃၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်။
OnePlus2သည်၎င်း၏တင်ဆက်မှုမတိုင်မီနာရီများအတွင်းလုံးဝပေါက်ကြားသည်
တရား ၀ င်တင်ဆက်မှုမစတင်မီ OnePlus2ကိုအသေးစိတ်နာရီများအတွင်းစစ်ထုတ်သည်။
OnePlus သည် OnePlus2ကိုရယူရန်ဖိတ်ကြားချက်များ၏သံသယကိုဖွင့်သည်
သေးငယ်တဲ့တရုတ် startup ၏စမတ်ဖုန်းကိုရှာဖွေရန်ရက်အနည်းငယ်သာကျန်တော့သည်။ ဒါကြောင့် OnePlus ကဖိတ်ကြားချက်ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားပါတယ်။
၁.၅ မီလီယံ OnePlus Ones များကိုစတင်ရောင်းချချိန် မှစ၍ ရောင်းချခဲ့သည်
OnePlus2ကိုထုတ်ဖော်ပြတော့မည်။ လာမယ့်အပတ်မှာအာရှထုတ်လုပ်သူရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အားလုံးကိုငါတို့သိမှာပါ။
OnePlus2သည် TENNA ကို ဖြတ်၍ ၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများအားလုံးကိုအတည်ပြုသည်
Oneplus2သည် TENNA ကို ဖြတ်၍ အာရှထုတ်လုပ်သူ၏အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုပြသသည်
ကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုကိုဂုဏ်ပြုရန်အတွက် OnePlus သည်ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်းရရှိခဲ့သောအောင်မြင်မှုများကိုပြသသည့်ပျော်စရာသတင်းအချက်အလက်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်
Oxygen OS သည် OnePlus အသစ်ပိုင်ဆိုင်သော ROM ဖြစ်သည်
Oxygen OS သည် OnePlus ဖုန်းများအတွက်သင်၏ရိုးရှင်းသော၊ bloatware-free နှင့်သန့်ရှင်းသော ROM အသစ်ဖြစ်သည်။
OnePlus One သည်တရားဝင် Android 5.0 ကိုလက်ခံရရှိသည်
Update သည်ပြphaseနာများရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည် Alpha အဆင့်ဖြစ်သောကြောင့် OnePlus One သည်တရားဝင် Android 5.0 ကိုလက်ခံရရှိသည်။
၂၆၉ ယူရိုအတွက် OnePlus One 16 GB ဖိတ်ကြားချက်မရှိဘဲရနိုင်သည်
သင် OnePlus One ကိုလိုချင်လျှင် OnePlus မှယောက်ျားများသည်သူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှဖိတ်စာများ (သို့) ကြိုတင်ကြိုတင်မှာကြားထားမှုများမပါဘဲသင်အား၎င်းတို့ကိုသင့်အားရောင်းလိမ့်မည်။ သင်ဝယ်ယူလိုက်ပြီးအိမ်သို့ယူသွားသည်။
နယူး OnePlus တစ်ခုမှာ update ကိုအမျိုးမျိုးသော bug တွေပြုပြင်
CyanogenMod သည် OnePlus One ဆွဲယူနေသည့်အမှားအယွင်းများစွာကိုပြုပြင်ပေးသည့် update ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးထို update သည်ဖုန်းကိုတည်ငြိမ်စေသည်။
OnePlus One တွင် Hey Snapdragon အသံ command ကိုမည်သို့သက်ဝင်ရမည်နည်း
OnePlus One ကိုနောက်ဆုံး update က Hey ကိုအသုံးပြုရန်စွမ်းရည်ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ Snapdragon ။ ဒီနေ့ဒီ option ကိုဘယ်လိုပြန်ရမလဲဆိုတာပြပေးပါမယ်။
[APK] Cyanogen Camera၊ Google Play စတိုးမှ OnePlus One ၏ကင်မရာ
Android application store၊ Google Plauy Store တွင် OnePlus One ကင်မရာကိုတရားဝင်ရပြီ။
OnePlus Lockscreen ပါသောမည်သည့် Android တွင်မဆို Android ပေါ်တွင် OnePlus One lock APK
ဤတွင်သင့်တွင် Android ၏ lock screen ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့်ဤ apk ရှိသည်။ ၎င်းသည် OnePlus One lock screen ၏ပံ့ပိုးမှုပေးသည်။
ကြာရှည်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသော OnePlus One ရောက်လာပြီ။ စျေးကွက်အား၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်ညှိနှိုင်းလိုသောမယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော terminal တစ်ခု။